ကောင်းစွာ၊ဖန်တီးရှင်မရှိလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ငွေတောင်း:သငျသညျအဘယျသို့ပွုနိုငျသကဲ့သို့အငှားလျှင်၊အရှင်အားဖြင့်၊လည်ပတ်မှုစရိတ်။ ည့္ဗ်ာ၊ဂျာမန်ရှေ့နေမှတ်ပုံတင်မည်၊ - ဂျာမန်ရှေ့နေကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ အကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာတယ်။
သင်သည်ဤသတင်းစကားကိုကြည့်ရှုသောကြောင့်၊သင့်ကိုမတားဆီးဖြစ်စေအကျဉ်းသားများ၏အကောင့်(အက္ခ)သာသ၊အပြည့်အဝတုံ့ပြန်မှုငါးသဟဇာတသို့မဟုတ်သင့် ရာက္ဇာခါႏွစတိုင်စာရွက်သတင်းအချက်အလက်'အမျို'။ သင်အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ဒီခေါင်းစဉ်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုဤစာမျက်နှာမှာအောက်ပါလိပ်စာ-အရှင်ကဖန်တီးပေးမျှလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ငွေတောင်း:သငျသညျအဘယျသို့ပွုနိုငျသကဲ့သို့အငှားလျှင်၊အရှင်အားဖြင့်၊လည်ပတ်မှုစရိတ်။အကယ္လိုအပ္ခ်က္ကေသည်တာဝန်ဝတ္တရားများ၊လည်ပတ်မှုစရိတ်ပေးရန်၊ဤဆက်စပ်မှု၌၊အတိုးငွေပေးချေမှု၊အရှင်ကုန်ကျရပါမည်နှစ်စဉ်လည်ပတ်လစာဖန်တီး။
ဤလက်ခံရရှိခြင်းကိုခံရမည်အားဖြင့်အငှားများအဘယ်သူမျှအကြာတွင်ထက်၏အဆုံးဆယ်နှစ်လ၏အဆုံးပြီးနောက်တိုင္မွီကာလ။ ယေဘုယျအနေဖြင့်၊ဒီအ ၃၁။ ၁၂။ နှစ်(အင်္ဂလိပ်ဝီန္ေဆာင္ခအခြေချသတ်မှတ်:အဘယ်အရာကိုကုန်ကျစရိတ်သည်အရှင်၏စီမံခန့်ခွဲအကောင့်အသစ်များဖန်တီးခဲ့ကြအဘယ်အချိန်သတ်မှတ်ဖို့လျှောက်ထား။)။ သို့သော်အဘယ်အရာသည်အငှားကုမ္ပဏီလျှင်၊အရှင်ပျက်ကွက်ဖန်တီးရန်အခြေချ။ သူတောင်းစေခြင်းငှါ၊ဥပမာအားဖြင့်၊၎င်းကြိုတင်ငွေပေးချေမှုသို့မဟုတ်အခြား ။ အငှားကုမ္ပဏီလျှင်၊အရှင်သည်အလုပ်လက်အောက်တွင်အခြေချအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်၊စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခံရဖို့အစပိုင်းတွင်ဖြစ်စေအပေါ် နေဆဲပြေး(၁။)သို့မဟုတ်ပြီးသားစဲ(၂။)။ အငှားနေဆဲတိုးတက်မှုအတွက်၊ငှားရမ်းခွင့်ရရှိထားပြီးအဘယ်သူမျှမဆိုကိုအမ်းငွေ၏အတိုးငွေပေးချေမှု၊သင့်ကုန်ကျစရိတ်အရလန္ဒန္၏၊ထိုအခြေချစစ်ဆင်ရေး၏။ သူ့ကိုအမှန်အထိန်းအဒါပေမဲ့အနာဂတ်ငွေပေးချေမှု။ ထို့အပြင်၊ဒါကြောင့်အများ၏ဖန်တီးမှုအခြေချ၏လမ်းဖြင့်တရားစွဲဆိုပဲ။ အငှားနိုင်မလေ့ကျင့်ခန်း၏ညာဘက်အထိန်းအရ§၂၇၃၏အရပ္ဖက္လူကုဒ်နှင့်၊ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်အတိုးငွေပေးချေမှု။ ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊အိမ်ရှင်အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ဖြစ်ပွားကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်။ အမှန်အထိန်းသည်ဥပဒေ၊ထိုကွောငျ့၊တစ်နည်းလမ်းများအဖြစ်ဖိအားနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အတွက်ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးအငှား("အငှား"ထို့အပြင်အရေးယူအတွက်ပြင်ဆင်မှု၏ဖော်ပြချက်များ၏လည်ပတ်မှုစရိတ်များနိုင်ပါတယ်မြင့်တက်။ေချီးမြှင့်ခြင်း၊အဆိုတော့ခြင်းများ၏နည်းလမ်းဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ငွေပေးချေမှုသို့မဟုတ်အပင်အားဖြင့်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှု။ ဆန့်ကျင်ဘက်အခုနှစ်၊အခြေချ၏လမ်းအတွက်အစားထိုးစြမ္းအားဖြင့်တစ်တတိယပါတီသည်(ဥပမာအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး)၏အမြင်တွင်ဖက်ဒရယ်တရားရုံး၏တရားသည် ။ ကြောင့်အရှင်ပျက်ကွက်ရှင်းပြဖို့အခြေခံ၎င်း၏အထူးအအသိပညာ၏အနှောင်အဖြစ်၊ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်တ်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ။ ထိုကဲ့သို့သောစာရင်းကိုင်အဖြစ်သာဖြစ်နိုင်သည်သူ့ကို(စဲအ ၊အမှန်များကိုထိန်းဖို့အမျိုးသမီး။ ယခင် နိုင်ပါသည်၊သို့သော်၊အကာအကွယ်အတွက်အခြားနည်းလမ်းများသူ၏ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွား။ အငှားခွင့်အပြန်အမ်းငွေများအားလုံးကိုကြိုတင်ငွေပေးချေမှု၏အဆုံးပြီးနောက်အ ဆန့်ကျင်သူ၏ဟောင်းများအိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကမလိုအပ်သောတိုင်ကြားမှပထမဦးဆုံးကိုဖန်တီးရန်အခြေချ။ မှတ်ချက်၊သို့သော်၊သောအရှင်နိုင်အလုပ်တက်အလုပ်ခလစာ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်၊အငှားများအကြားကိုတရားဝင်ချီးမြှင့်တောင်းဆို ပြန်ဆပ်၏အတိုးငွေပေးချေမှုကိုတာဝန်ပေးဆောင်ဖို့။ ကိုနောက်ခံ၏ဒီလည်ပတ်မှုစရိတ်ဟာမငြင်းနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မှကင်းလွတ်အ ။ အရှင်၊§နှင့်အညီ ၅၅၆ တယ္။ အောင်သုံးဝါက်အသုံးအ ၊သို့သော်၊တားဆီးမှမည်သည့်အပိုဆောင်းအလုပ်ပဲဖြစ်ဖို့အခိုင်အမာ။ အငှားနိုင်ကြသည့်အကျိုးစီးပွားအတွက်အဆိုပါဖော်ပြချက်များ၏လည်ပတ်မှုစရိတ်များကြောင့်ရှိပါတယ်၊အောက်တွင်အချို့သောအခြေအနေ၊တစ်ခရက်ဒစ်။ဒီသာသာရနိုင်ပါသည်အားဖြင့်အောင်မြင်အခြေချ။.
နေစဉ်ကဖြစ်နိုင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းငွေပေးချေမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရှင်၊§နှင့်အညီ ၅၅၆ တယ္။ သုံးထားသုံးဂျာမန်နိုင်ငံသားအကုတ်၊သို့သော်၊ကနေကာကွယ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်မည်သည့်အပိုဆောင်းအလုပ်ပဲဖြစ်ဖို့အခိုင်အမာ၊အကယ္လက်ခံန္ေဆာင္ခအခြေချနောက်ကျလွန်းအငှား။ ထို့အပြင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်အခြေချသတ်မှတ်:အဘယ်အရာကိုကုန်ကျစရိတ်သည်အရှင်၏စီမံခန့်ခွဲအကောင့်အသစ်များဖန်တီးခဲ့ကြအဘယ်အချိန်သတ်မှတ်ဖို့လျှောက်ထား။ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်လုပ်ခလစာနှင့်ဘောက်ကော်ပီ:သင်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်အဖြစ်ငှားသောအရှင်ကစောင်များ ကိုယ်ရေးစာရွက်စာတမ်းများ။ လည်ပတ်မှုစရိတ်:အရှင်၊အဘို့အဖန်တီးမှုအခြေချစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်အခကြေးငွေနှင့်မည်သို့မြင့်မားစေခြင်းငှါအခကြေးငွေ။ မှတ်ပုံတင်ရှေ့နေဥပဒေရေးရာကိစ္စများကို။ ဟိုတယ်ချစ်ရှေ့နေ ။ ၊အဖတ်သင်၏ပို့စ်"သက္သက္မလည်ပတ်လစာစရိတ်:အဘယ်အရာကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်ပြုအဖြစ်အငှားသောအခါထိုအရှင်အကြောင်းကိုလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်၊။"၏ဂ်ာဘားဘာင္ေလိုငါ့ကိုဒီဆွေးနွေးဖို့ခေါင်းစဉ်။ ကျေးဇူးပြုအကြှနျုပျကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ လူနှစ်ဦးအငှားဖို့စုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်အတူတကွအအိမ္ရာ၊၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အခြာ၊အဆိုပါမေးခွန်း၊အဖြစ်နှင့်အတူအခိုင်အသီးအသီးအခြားအဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအဖြစ်အလန္ဒန္၌မှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုဆွဲထုတ်ရဲ့အဆုံးမှာ။ အခွင့်အရေးများ၏လိုသူဆိုင်းအငွားလျှင်အခြားလိုနေထိုင်ရန်အတွက်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့၊ရန္ကုန္တိုင္းေ၏အမကြက္တရားရုံးကြီးကို ငွေပေးချေမှု၏အပျက်အစီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တန်ဖိုးဒီဇယ်မော်တော်ယာဉ်တစ်လိုင်းဆဲျဖစ္သည္။ အရင်အများခရိုင်တရားရုံးများ၏၊ဂျာမဏီ(ဇောဘိုင်ဂျော။ နှစ်ဦးအို ၃၁၃၁၇)ဖွယ်ရှိသည်အောင်မြောက်မြားစွာ၊အဇောငွေ့အရှုပ်တော်ထိခိုက်စံခ်ိန္တင္ထားဖောက်သည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဆိုပါနမူနာ-အခြေခံဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသော ခဲ့နိုင်ပြန်ရရန်အဘို့အရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောကုမ္ပဏီကြီးပေးခြင်း။ မမြည်းစမ်းဖို့စံခ်ိန္တင္ထား။ အကဲဖြတ်၏အဖက်ဒရယ်တရားရုံး၏တရား၌ဇောငွေ့အရှုပ်တော်ပုံ၊မည်မဟုတ်များအတွက်အချိန်ဖြစ်ခြင်း။ ဖက်ဒရယ်တရားရုံးသည်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု၏၈။ ဇန္နဝါ ၂၀၁၉ အပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘေးထွက်ဆိုး၏စားသုံးသူသည္။ ဟာ္မုန္းစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းခွင့်ပြုထားကြသည်မဟုတ်အယူအကျိုးစီးပွားအခမဲ့ချေးငွေ၏လူနာ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊အလုပ်ရှင်အဖြစ်ရပ်စဲလိမ့်မည်သင်၏အပျက်အကျိုးကျေးဇူး၊လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၊၏ဆံုးျေဒသအလုပ်သမားတရားရုံး၏ အတွက်တစ်မကြာသေးမီကထုတ်ဝေတရား၏၂၀။ ၁၂။ ၂၀၁၈(ဇောဘိုင်ဂျော:ရှစ်ဆယ်စ ၉၄၁၁၈)။ အစုအက်ိဳးဘာသာျပန္ထားေသာစာပိုဒ္တိုမ်ားအပါအမွားမ်ား စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတယ္၊ေရးတဲ့"အစုအမှု၊အများ၏အကြို-ရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တောင်းဆိုငွေပေးချေမှု"။ ပြီးနောက်အရည်အချင်းအချင်းချင်းကွဲပြား၏အဖက်ဒရယ်တရားရုံး၊အစမ်းသပ်နေ့စွဲ၏၂၇။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉ အောက်ပါမှတ်ချက်အပေါ်နှိုင်းယှဉ်တီများအကြားအသိရသည်လိုက်၊တရားအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ပဏာဥပဒေကြောင်းအရမြင်။ စက်မှုထုတ်လုပ်မှု၏ဆာက္အစိတ်မအတုပံ့ပိုးမှု။ သို့သော်ငြားလည်း၊ကအစောအတွက်၊တစ်ဦးချင်းစီကိစ္စများတွင်၊ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲဖြစ်ပါသည်၊အတွက်တရားရုံး၏။ ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်၊ထိုပြသထားသည့်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု၏ထုတ်လုပ်သူဆာက္အရခ်ိဳး၊အောင်မြင်စွာဆန့်ကျင်၊အလှူတောင်းဆိုမှုများမှလူမှုရေးရန်ပုံငွေအဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း(တု-)စစ်တိုက်။.
© 2022 ဂျာမန်ရှေ့နေကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ အကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာတယ်။